Siyaasa Itoophiyaa: Paartileen siyaasaa fi Dr. Abiy maal mari'atan? - BBC News Afaan Oromoo
Paartileen siyaasaa 52 ta'an Ministira muummee Dr. Abiyyi Ahimed waliin masaraa biyyaalessaatti Dilbata mari'ataniiru.
''Akka hin dogongorre, ADWUI'n dhiibbaa ture jalaa bahuun cimaa jira.... Uummanni gara keenyaa dhufaa jira. Akkasitti gargar facaatanii ammoo nu waliin morkachuu hin dandeessan....'' jechuun ergaa dabarsan Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad.
Dhimmi marii maal ture?
Hoggantoonni paartilee siyaasaa morkattootaa dubbisne waan jedhan, fooyya'iinsa siyaasaa fi seerota filannoo fi Boordii Filannoo fooyya'uu qabanirratti mar'iatan.
Hunda dura paartileen lakkoobsa qofaan heddummaatanii maqaadhaan taa'an akkaataa walitti dhufeenya kaayyoosaaniitiin qindomina uumanii jabaatanii morkachuu danda'uu qabu jedhan Dr. Abiy.
Mariisaanii irrattis koreewwan afur kan haala qabatamaa jiru qoratanii bu'aa qorannoosaanii dhiyeessan hundaa'aniiru.
Paartilee siyaasaa morkattootaa waliin ji'a lama lamaan walarganii mariyachuufis Ministira Muummee waliin walii galleerra jedhu.
Yaada Paartilee Siyaasaa
''Yaadaa fi ilaalcha walfakkaataa waan qabnuuf waliin hojjennee jijjiirama eegalame milkeessuuf walii gallee adda baane,'' jedhu Dura Taa'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) Obbo Leencoo Lataa.
Koreewwan arfan hundaa'an keessaa koree rifoormii akka qindeessan kan ga'een kennameef Obbo Leencoon ''Haala jijjiirama siyaasaa yeroo ammaafi kan kanaan dura ture wal bira qabuun akkamiin isa gaarii cimsinee deemna kan jedhurratti waraqaa barreesseen wal ga'ii itti aanutti dhiyeessa,'' jedhan.
Kanaan dura jijjiirama warraaqsaa malee jijjiiramni wayyeessaa hin turre kan jedhan obbo Leencoon, seenaan darberraa kaanee akkamiin fuuldura ifaa qabaannee deemna kan jedhurratti waanuma kanaan dura hojjechaa turre daran bilcheessinee hojjenna jedhan.
Dhaabbileen Oromiyaa keessa jiranis ta'e akkuma biyyaatti jiran hedduudha kanaaf yoo qindoomina uumanii hojjetan gaariidha yaadi jedhu, Ministira Muummee biraa ka'ee ture, isa kanarrattis Obbo Leencoon yaada kennaniiru.
Dhaabni mormituu Tigraay biyyatti deebi'uufi
''Maqaadhaan paartii siyaasaa ta'anii kan walga'anillee mari'atanii hin beekne ni beekna,'' kan jedhan ammoo Paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo irraa Obbo Gabruu Gabramariyaami.
Qabxiiwwan Ministira Muummee waliin irratti mari'atan keessaa isaan ijoon ADWUIn ofumaasaatiin heera mootummaa hojiirra oolchuurratti rakkoo guddaa qaba ture, kanaaf heera mootummaa kabajuurraa eegaluun ni barbaachisa, keewwattoonni dhimma filannoon walqabatanis akka foyya'uu qaban walii galleerra'' jedhan.
Seerri Filannoos Boordiin Filannoos rakkoo qaba kan jedhan Obbo Gabruun kunimmoo adeemsi filannoo akka waliin dhahamu haala mijeessaa turuu himu. ''Boordiin filannoo walaba miti. Waajjiraaleen filannoo naannoleerra jiranis rakkoo walfakkaataa qabu.
Raawwachiistonni seera filannoos kan filataman dandeettiidhaan osoo hin taane warra ADUIf ergamaniidha. Kanaafuu namoota dandeettii qabanii fi paatilee siyaasaarraa walaba ta'aniin ijaaramuu qabu jennee walii galleerra.'' jedhan.
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahmad koreen haala qabatamaa biyyattii qoratee dhiyeessu hundaa'ee hojii akka eegalu murteessuu kan dubbatan Obbo Gabruun, koreen waa'ee Seera filannoo fi Boordii Filannoo qoratee dhiyeessu kan Pirofeesar Bayyanaa Pheexiroosiin durfamu, Koreen dhimma dargaggootaa, Koreen waa'ee haala Rifoormii kan Obbo Leencoo Lataatiin durfamuu fi kan biraa walumatti koreewwan afur hundeeffamuu nutti himaniiru.
Dubbi Himaan Paartii Samayaawwii Obbo Abebe Akaaluu seerri filannoo walii galaan fooyya'uu akka qabu irratti dubbatanii waliii galuu dubbatanii, sana keessammoo bakka rakkoo hamaan jiru Boordii Filannoo keessatti fooyya'iinsi bu'uuraa geggffamuu akka qabu walii galeerra jedhan.
Seerota filannoo fooyya'uu qaban nutis qorannee akka dhiyeessinuuf ministirri muummee ji'a lama lamaan akka wal arginu murteessaniiru kan jedhan Obbo Abbabaan, haala kanaan dura turee fi kan ammaa yoo walbira qaban; kanaan dura yoo paartii keef miila kaaste sirraa muruuf kan kajeelu har'a paartilee morkattoota jabeessuu barbaanna kan jedhurra ga'uusaaniif kan gammadan ta'uu dubbatan.
ADWUInis amma dhiibbaa waggota 27 jalaa ba'ee amma cimaa jiraachuunsaa kana fideera jedhan.
Paartileen heddummaachuun faffaca'anii bu'aa buusanirra qindoomina uumuun akkaataa walfakkaataniin walitti ida'amanii paartii morkataa cimaa ta'uun of hundeessuu akka qanillee Ministirri Muummee dhaamaniiru jedhan. Ta'uu baannaan maqaadhuma qofaaf paartii jedhamuun akka itti fufus eeraniru.
''An gama kootiin mootumaaf osoo hin taane paartileedhaafan ergaa dabarsa. Qindoomanii hojjechuu qaban. Nuti gama keenyaan qindoomna uumuu barbaanna.
Paartiin Samayaawwii ibsa yeroo darbe baaseen Paartii Ginboot 7 waliinillee qindoomee tokko ta'ee jabaatee bahuu akka barbaadu ibsee ture.
Paartilee biroodhafis waamicha gooneerra. Paartiin tokkummaa duraaniis as makamaniiru. Kanaafuu nuti Paartiin morkataa cimaan tokko naannoo Amaaraa keessa akka jiraatuuf hojjechaa jirra.''
Siyaasa Itoophiyaa: Dhaabni mormituu naannoo Tigraay biyyatti deebi'uufi